Kedu onye Ender gburu na egwuregwu Ender? - Magazin ADL ➡
Onye Ender gburu na Ender's Game?
N'otu aka ahụ, onye ka Ender Wiggin lụrụ?
Family John Paul Wiggin (nna) Theresa Wiggin (nne) Peter Wiggin (nwanne) Valentine Wiggin (nwanne)
Òtù Ọlụlụ Novinha Ribeira
Children Miro Ribeira (nwa nwoke) Ela Ribeira (nwa nwanyị) Quim Ribeira (nwa nwoke) Olhado Ribeira (nwa nwoke) Quara Ribeira (nwa nwanyị) Grego Ribeira (nwa nwoke)
Ọzọkwa, Gịnị bụ ezigbo aha Ender?
Ọnye na -bụ Andrew Wiggin?
36 Ajụjụ na Azịza Yiri nke Achọtara?
Ònye ka Ender Wiggin lụrụ?
Afọ ole bụ Valentine na Ender's Game?
Gịnị bụ ezigbo aha Ender?
Onye ghọrọ enyi mbụ nke Ender?
Afọ ole ka etinyere na njedebe egwuregwu Ender?
Gini na-eme na isi nke 2 nke Ender?
Gini na-eme na isi nke 13 nke Ender?
Kedu ka ọbụbụenyi Ender na Dink na Petra si agbanwe?
Kedu ihe mere Petra na Ender's Game?
Kedu mba Petra Arkanian si?
Kedu ihe na-atụ egwu ender?
Kedu ihe Valentine dị ka Ender's Game?
Kedu onye kacha mara ihe na Dragọn Army?
Nye bụ onye nkuzi Ender na Isi nke 14?
Kedu ihe na-eme Peter na Egwuregwu Ender?
Gini mere Ender ji aghari ulo na mberede?
Kedu ihe Ender hụrụ n'enyo?
Gini mere eji machibido Ender egwuregwu?
Kedu ihe kpatara Dink ji chọọ ender na Toon ya?
Kedụ ka Valentine si eme emume ncheta ọmụmụ Ender?
Afọ ole bụ njedebe mgbe ọ ghọrọ ọchịagha nke Dragọn Army?
Gini mere Ender jiri buru ulo na ulo?
Gini na-eme na isi nke 9 nke Ender?
Gini na-eme na isi nke 11 nke Ender?
Esi kọwaa afọ Ɛpo na Pita banye Ender egwuregwu. Na njedebe nke Ender si Game, ọ na-ekwu na Ɛpo dị afọ iri abụọ na ise na Peter dị afọ iri asaa na asaa, nke pụtara na ọ gbara afọ iri ise na abụọ tọchara ya. Otú ọ dị, Ɛpo bụ onye mbụ naanị afọ 2 dị obere karịa ya.
Na njedebe nke Ender's Game, ọ na-ekwu na Valentine bụ 25 na Peter dị afọ 77, nke pụtara na ọ dị afọ 52 tọọ ya. Otú ọ dị, Valentine bụ na mbụ 2 afọ tọrọ ya. A kọwara nke a dị ka n'ihi na ọ gara njem afọ 50 n'oge ụwa, mana maka ya, ọ bụ naanị 2 afọ.
N'akwụkwọ, Na-adịghị ahụkebe dị afọ 6 mgbe ọ hapụrụ Earth maka agha School na 11 site na oge nke "ahem *" nyocha ikpeazụ ". Ahụbeghị m ihe nkiri ahụ mara ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu Afọ Ender, ma ndị na-eme ihe nkiri kwuru Na-adịghị ahụkebe na fim bụ 12.
Na-adịghị ahụkebe ghọtara na Graff kewapụrụ ya ka o mee ya onye agha kacha mma ọ nwere ike ịbụ, ya onwe ya is ugbu a na-eme ya agwa. na Na-adịghị ahụkebe marakwa na ndị nkuzi nwere ike emerula ya ahụ́ ọzọ. Ọ na-ahụ na ha ji Valentine dị ka ngwá agha, na o kpebiri imeri ha maka ya.
Na-adịghị ahụkebe anọwo n’elu ala ọnwa abụọ n’enweghikwa obi ịlaghachi na mbara igwe. Ọ chọghị ịlụ ọgụ, ọ na-arịa ọrịa egwuregwu. Ha na-ekwu okwu ogologo oge, Valentine na-amata ihe kpatara ya Na-adịghị ahụkebe ike gwụrụ ịlụ ọgụ. Ọ na-amụta ndị iro ya nke ọma nke na ọ fọrọ nke nta ka ọ hụ ha n'anya, wee kpochapụ ha.
na Na -ainkụ mmanya, ya enyi na-aghọwanye nke asọmpi. Ya na Na -ainkụ mmanya na mberede, ha abụọ ghọrọ ndị ọchịagha, na-asọ mpi n'etiti ha. Na-adịghị ahụkebe bụ obere nwa, na Na -ainkụ mmanya na-ekwo ekworo na Na-adịghị ahụkebe enwekwara iwu. Ya na Petra, mmekọrịta dị nnọọ eto iche.
N'ikpeazụ, Petra gbawara ma hie ụra n'oge agha, na-akpata oke mbibi nye ndị agha ya; A ga-ekpochapụworị ndị agha ya niile ma ọ bụrụ na Bean ahụghị nlebara anya ya. Mgbe nke ahụ mechara, Na-adịghị ahụkebe kwụsịrị ịdabere na ya nke ukwuu na Petra furu efu ihe ka ọtụtụ n'ụgbọala ya.
Na-adịghị ahụkebe is egwu nke nwanne ya ma hụ nwanne ya n'anya. Ebe ọ bụla ọ gara, Na-adịghị ahụkebe na-eme ka ihe na-eme, ma mgbe ọ dị afọ itoolu e nyere ya ndị agha nke ya ka ọ bụrụ onyeisi. Na-adịghị ahụkebe na-ewe iwe megide ndị dị iche iche na-emegharị ya n'ime akwụkwọ akụkọ ahụ dum. Gụọ ihe omimi nyocha nke Na-adịghị ahụkebe.
Ɛpo. Ɛpo is Nke Ender nwanne nwanyi okenye, ya onwe ya eme ihe ọ ga - eme iji chebe ya pụọ ​​na Peter, nwanne ha nwoke nke tọrọ arụrụ ala. Ɛpo nwere ọtụtụ n'ime Nke Ender ọmịiko, ma ọ eme enweghị obi ịta mmiri nke Pita.
The onye kacha mara ihe nke dragọn agha bụ Bean. Mgbe ọzụzụ ọhụrụ ya agha, Olee ihe wutere ya banyere otú o si mesoo ndị agha ya ihe? O wutere ya n'ihi na Ender chere ihe mere o ji mee ka otu nwa nwoke bụrụ onye a na-eche maka ndị ọzọ niile, mere ka ọ bụrụ ezigbo onye ndu.
Ha na-emerụ onwe ha ahụ, na mgbe Na-adịghị ahụkebe mechaa jụọ agadi nwoke ahụ aha ya, nke ọhụrụ ya onye nkụzi kwuru, sị: “Mazer Rackham.” Mazer emeela agadi ugbu a inye iwu (ọ dị ndụ site na ntụgharị ntụgharị, mee afọ asatọ ka ụwa gafere afọ iri ise), mana ọ nwere ike ịkụzi.
Peter emecha nweta ike n'elu ụwa dum wee ghọọ Hegemon, onye ndu nke ụwa. O nwere ike ime n'udo, ọ bụ ezie na nke a adịghị mkpa maka ya, ọ bụ nanị ụzọ kasị mma isi nweta ike.
Gịnị kpatara Ender ji chọọ imecha egwuregwu ahụ? Ọ chọrọ ibi ndụ dị ka ụmụaka ndị ọzọ na dabara na. Ọ na-anụ ka ọ na-eti mkpu n'otu oge, na-eziga ndị agha ya megide Na-adịghị ahụkebe.
Azịza ọkachamara kwupụtara
N’isi nke 7 Na-adịghị ahụkebe amalite agụụ ụlọ ga na-agụ gị n'ihi na ọ na-echegbu onwe ya inwe ndị enyi bụ ụmụ agbọghọ ga-emebi ụzọ n'okporo ámá ya. Ọ na-agụkwa ndị mụrụ ya na ndị enyi ya agụụ.
na mirror, Ender na-ahụ obughi ihu nke ya kama iru nwanne ya nwoke, Peter. Peter bụ oyi, aghụghọ, ime ihe ike, na obi ọjọọ, na enyo si echiche bụ nnọchite nke Nke Ender egwu kachasị: na n'ikpeazụ, ọ ga-adị ka nwanne ya nwoke.
Ihe kpatara ya Ender si Game bụ nke mbụ iwu bụ n'ihi na e debere ya na "akara ọjọọ" nke "akwụkwọ ọjọọ" nke otu Baptist ọtụtụ afọ gara aga, ma tinye ya na ndepụta ahụ enweghị ihe ọzọ karịa na m bụ onye Mọmọn, yabụ na ụmụaka ekwesịghị ịgụ akwụkwọ m.
Na nchikota. Nke abụọ isi na-amalite site na mkparịta ụka n'etiti otu ndị okenye abụọ, bụ ndị o doro anya na ha kwadoro ụzọ ahụ Na-adịghị ahụkebe soro Stilson, tụlee omume ya na nke onye aha ya bụ Mazer Rackham. Peter kpebiri na ya na Na-adịghị ahụkebe kwesịrị igwu egwu buggers na astronauts, ụmụ nkịtị game.
Kedu ihe mere Dink ji chọọ Ender na toon ya? Na-adịghị ahụkebe na-egosi nkwa, na Dink chọrọ ịzụ Na-adịghị ahụkebe. “Ọ bụ na ndị nkụzi, ha na onye iro. ” The ndị nkuzi na-azụ na ụmụaka na-alụ ọgụ, na-akpọ asị, ma merie na-enweghị ihe ọ bụla na ụmụ chọrọ or mkpa. The ndị nkụzi na-amanye na tomụaka ịghọ okenye.
Ɛpo is eme ememe Ender's nke asatọ Ụbọchị ọmụmụ n'oké ọhịa dị nso n'ụlọ ọhụrụ ha na North Carolina. Naanị Ɛpo yiri ka ọ na-echeta Na-adịghị ahụkebe. Banyere Pita, ntọala nkịtị emeela ka ime ihe ike ya belata; Ɛpo huru ohia akpukpo aru (oru di egwu Peter) otu ubochi.
Na-adịghị ahụkebe enweela afọ atọ, yabụ ọ bụrụ he bụ 8 (nwanne ya nwoke Peter bụ 10, na nwanne ya nwanyị Valentine nọ n'etiti ha) mgbe he sonye na mmemme, Na-adịghị ahụkebe ọ dị ihe dị ka afọ 11 ugbu a.
Nchịkọta. Mkparịta ụka na-amalite Chapter 13 abụghị banyere Na-adịghị ahụkebe kama maka Peter na Valentine. Graff na-eburu ya ka ọ gachara akwụkwọ otu ụbọchị wee kpọrọ ya gaa hụ Na-adịghị ahụkebe. A manyere ya ịtụkwasị ya obi mgbe o kwuru na ọ maara onye Demosthenes bụ; Valentine achọghị ka Locke mata gbasara nzukọ a.
Laghachi na Ụlọ Akwụkwọ Agha Itoolu otu afọ Na-adịghị ahụkebe bụ onye agha kachasị elu na onye ndu ndị agha na Phoenix Army na Petra dị ka ọchịagha, mana ọ kpọrọ ndụ ya asị. Graff na-abịa ịgwa Valentine okwu n'ihi na o kwere Na-adịghị ahụkebe chọrọ enyemaka. Ọ jụrụ ya ihe na-eme ya Na-adịghị ahụkebe dị iche na Pita nakwa ma ọ bụrụ na Pita bụ n'ezie onye ọjọọ ahụ.
egwuregwu, igwu mmiri
Kedu kilogram dị kubit iri anọ?
Kedu ihe dị mma maka ụmụ nwanyị 5 5?